I-Spiro: Ukuzibandakanya Okuthengiswayo Okusebenzayo Kusebenzisa i-AI | Martech Zone
uSpiro isebenzisa ubuhlakani bokufakelwa ukunikeza abaholi bakho bezentengiselwano ukuqonda okusebenzayo kanye nezincomo zabamele abathengisi bakho izinyathelo ezilandelayo ezihamba phambili ukusiza ukuvimbela amathuba alahlekile futhi ukwandisa umkhiqizo wokuthengisa.
Amaklayenti akwaSpiro abika imiphumela emangalisayo, kufaka phakathi:
Amandla wokuqoqa Idatha ephindwe kayishumi nesithupha
Amandla wakho noma weqembu lakho lokuthengisa finyelela amathemba amaningi angama-30% ngesikhathi esibekiwe.
Amandla vala ukuthengisa okungaphezulu kwama-20% Amadili
Izinzuzo zeSpiro Faka
USpiro wethula indlela entsha yokuthengisa okuzenzakalelayo: ukuphathwa kobudlelwano okusebenzayo.
Imisebenzi yeqembu lokugxila - Umsizi weSpiro unikeza abasebenzisi uhlu lwezinto okufanele zenziwe nsuku zonke ze-AI nemisebenzi eyenziwe ngumsebenzisi ekhulisa umphumela.
Khulisa umkhiqizo weqembu - Ukushaya kwe-VoIP okwakhelwe ngaphakathi nohlu lwezingcingo olwenziwe nge-AI livumela amaqembu ukuthi afinyelele kumathemba amaningi, futhi ukugawulwa kwamakholi okuzenzakalelayo kukhulisa ukusebenza kahle kwethimba.
Qinisekisa ukubandakanyeka okusebenzayo - USpiro uhlinzeka ngezikhumbuzi zokulandela okusebenzayo ezincike ezingxoxweni ukuqinisekisa ukuthi ayikho into eshibilika emifantwini.
Ukusheshisa ukuqhubekela phambili kokuthengiselana - USpiro uhlaziya izikolo zokuzibandakanya futhi ugxile ekubuyeleni emathubeni okungenzeka avale.
Khulisa ama-win-rates - USpiro uhlinzeka ngokubonakala okuphelele kwamapayipi kanye nokuqonda okusetshenziswayo ukusiza ukuvimbela amadili alahlekile.
Ukubikezela Kokuthengisa - USpiro unikeza ukubonakala okugcwele kupayipi lakho futhi unikeze izikolo zokubandakanya isivumelwano ukuthuthukisa ukunemba.
AbakwaSpiro abalisusi ithuluzi lokuzenzakalela lokumaketha (esikhundleni salokho, bayahlangana nalawo mathuluzi), kepha ungathumela ama-imeyili enzelwe izinhlu eziqondiwe zoxhumana nabo abangama-500, ngokwazi ukuzihlelela isikhathi nosuku oluzayo.
Hlela iDemo ye-Spiro
Sibonga ngokukhethekile kuSheryl ku IKhabhinethiM ukuthola!
Tags: aiikhabethemkhulisa amadiliukwandisa ukuthengisa kuvalwaukuthengisa okuphumayoukubandakanyeka kokuthengisa okubikezelayoUkunika Amandla Ukuthengisaukuzibandakanya kokuthengisaumsebenzi weqembu lokuthengisaumkhiqizo weqembu lokuthengisai-spirovoip